कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षणको नतिजा सकारात्मक – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Health/कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षणको नतिजा सकारात्मक
३१ असार, काठमाडौं । अमेरिकी कम्पनी मोडर्नासँगको सहकार्यमा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोपको शुरुवाती परीक्षणको नतिजा सकारात्मक आएको बताइएको छ ।
वैज्ञानिकहरुले यो खोपको जसरी काम गर्छ भनेर शुरुमा अपेक्षा गरिएको सोही अनुसार नै यसले परीक्षणको क्रममा काम गरेको बताएका छन् । अब यो खोपको अन्तिम तथा महत्वपूर्ण परीक्षण हुन बाँकी छ । अमेरिकी वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले भने, ‘तपाईँहरु जतिसुकै काँटछाँट गर्नुस्, यो राम्रो समाचार हो ।’अब यसको महत्वपूर्ण परीक्षण जुलाई २७ मा शुरु हुने अनुमान गरिएको छ । यो चरणमा ३० हजार मानिसहरुमा यो खोपको परीक्षण गरिनेछ । यो परीक्षणको क्रममा खोप वास्तवमा नै प्रभावकारी र सुरक्षित छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ ।
मंगलबार शोधकर्ताहरुले ४५ मानिसमा गरिएको परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेका थिए । जुन नतिजाको विश्वभर प्रतीक्षा गरिएको थियो । त्यस्ता स्वयंसेवकहरुमा न्युट्रालाइजिङ एन्टिबडी विकास भएको थियो । जसले शरीरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
यो खोप विकास भइसकेपछि कोरोना संक्रमितलाई एक महिनाको अन्तरालमा दुईपटक यो खोप दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म यो खोपको कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट नपाइएको बताइएको छ ।
परिवार नै मिलेर बिहानको समयमा योग, ध्यानको अभ्यास गरौं । तर, कहिल्यै योग वा ध्यान नगरेकाले कसरी गर्ने ? यहाँ केही उपाय सुझाइएको छ ।
मो’टोप’न घटा’उन चाहनुहुन्छ ? रातको समयमा गर्नुहोस् मात्र यी चार काम अनि हेर्नुहोस